Umkhuleko ukuze angiphuphe. ? Ngobusuku futhi Cabanga Ngami
Thandazela ukuba angiphuphe. Kungabukeka njengesenzo sobugovu kepha iqiniso ukuthi lokhu kungaba yi yemikhuleko ngokweqiniso okukhulu esingakwenza ezimpilweni zethu.
Ukungena emaphusheni omunye umuntu kungaba yinkinga ebucayi uma kungenziwa ngendlela enobuntu, yingakho kufanele sazi konke okushiwo ngumkhuleko ngaphambi kokukwenza ukuze sikwazi ukwenza kahle.
1 Uyini lo Mthandazo wokuthi uphuphe ngami?
2 Umkhuleko wokuphupha nami kulobubusuku
3 Umkhuleko wokungicabanga ungiphuphe
4 Umkhuleko ekufeni okungcwele ukuphupha nami
5 Umkhuleko ukuze ngingalali ngicabanga ngami
5.1 Ngingasho yonke imithandazo?
Kuyini lokhu Umkhuleko wokuphupha nami?
Injongo yeqiniso icacile, ukwenza lowo muntu aphuphe ngawe, ukuthi ngisho nasemaphusheni ungakhohlwa wena.
Se ungafaka isicelo kulezo zimo zobudlelwano bebanga Kwenziwe, omunye umuntu angaba sengozini noma kube lula ukukhohlwa ngawe.
Bathi amaphupho anamandla yingakho sicela ikakhulu ukuthi uhlale kuwo isikhathi eside ukuze uqinise imizwa.
Lomkhuleko ungenziwa ngaso sonke isikhathi nakuzo zonke izindawo.
Akukhathalekile ukuthi lowo muntu unesikhathi eside engasiboni noma ekhuluma nathi, okubaluleke kakhulu ukuthi ucabanga futhi aphuphe ngathi ngaso sonke isikhathi.
Umkhuleko wokuphupha nami kulobubusuku
Phupha nami namuhla, sithandwa sami,
Yebo, imiphefumulo yethu imiselwe ukuhlala ndawonye!
Phupha nami namuhla, sithandwa esingapheli, ngoba ngikhona
Ngihlanganisa amandla amiselwe ukumiselwa
Emcabangweni wakho wasebusuku wacabanga isithombe sami, umongo wami
Futhi izwi lami ukuze laba lisebenze
Ubukhona kuwe kulobubusuku.
Ngokubambisana sizondiza sidlula emameleni angaziwa;
Ngokubambisana sizohamba ngezikejana zolwandle;
Sizojabulela nje emahlathini ashisayo;
Ukucabanga kwakho kuzoba ngumkhawulo kodwa kuphi
Ukuthi ukwenze, kuzohlala kuyimi nawe.
Sengathi la magama angafika engqondweni yakho nokuthi
Bancibilika ngaphakathi kuwe ukuze
Ukuthi angisoze ngaphunyuka emzimbeni wakho
Hhayi noma uvala amehlo akho
Thatha ithuba lamandla omthandazo ukuphupha nami kulobubusuku.
Luhlobo oluthile lomkhuleko ngoba sicela ukuvela emaphusheni akho ngalobo busuku esithandazayo.
Lokhu kumane nje kuyenze onke anamandla futhi asebenzayo.
Ngokunokwenzeka, ngemuva kwalobusuku safunda ngephupho ayenalo njengomuntu nathi ngoba cishe wayezozama ukuxhumana nathi ngoba amaphupho avame kakhulu.
Umkhuleko wokungicabanga ungiphuphe
Ngishayele manje, manje manje ...
(Yisho igama lomuntu)
Ngalesi sikhathi, noma kuphi. Okwamanje uzobeka ukugxila kwakho nemicabango yakho kimi ...
(Yisho igama lakho)
Uyaqonda ukuthi awunakuphila ngaphandle kwami. Okwamanje uzoqala ukulahla ukuziqhenya kwakho. Okwamanje uzimisele ukungishayela ucingo. Njengamanje uyangicabanga ...
Ngabe uzozama ukumelana? Ungamelana. Uma ...
(Isho igama lomuntu) Ungangibizi manje, uzongishayela ngokuhamba kwesikhathi. Kepha manje ungaqiniseka ukuthi uzongibiza.
Uyaqonda ukuthi uyangithanda futhi awukwazi ukuba phambi kwami. Okwamanje ucabanga ngami ...
(Yisho igama lakho) Ngicenga izingelosi ezintathu, uMiguel, Gabriel noRafael, ukuthi zikhanyise inhliziyo yakho ...
(Yisho igama lomuntu) bese uhlehlisa noma yimiphi imibuzo. Okuzoxoshwa nguMikayeli kude nawe umoya wobubi nawo wonke amathonya amabi.
UGabriel umemezela kuwe ... (Yisho igama lomuntu) Igama lami, lelo elihlaba igama elithi "Uthando" endlebeni yakho futhi uyangikhumbula ...
(Yisho igama lakho) Rafael ukusebenzisa umuthi wokupholisa ukuphulukisa ukungathembani okukhule enhliziyweni yakho, nokugcina isikhewu sika "Uthando" nesifiso kimi sivulekile ...
(Yisho igama lakho).
Ngena emicabangweni yomunye umuntu futhi ubathinte ukuze ulale ulokhu uphupha ngathi Kubukeka njengesicelo esizinze kakhulu noma esisontekile futhi abanye bangacabanga ukuthi singabahlaseli ngoba singena kunembeza womuntu othile ngaphandle kwemvume yabo, kodwa iqiniso ukuthi sicela isimangaliso kuphela, sisebenzisa izikhali zokomoya esivuna thina.
Sifanele siqiniseke, siqiniseke ngokukholwa lokho lo musho uzokwenza umphumela owufunayo ngaphandle kokubanga usizi noma ukuphazamiseka okuthile okungafuneki futhi ngalokhu akukho lutho olungcono kunokugcina inhliziyo iphilile ezifisweni ezimbi nasemandleni amabi.
Umkhuleko ekufeni okungcwele ukuphupha nami
Ngamandla weSanta Muerte kanye nemiphefumulo emithathu ebonwa nguSanta Muerte uJoGF Ngokuza kwamandla kaSanta Muerte kanye nemiphefumulo emithathu uSanta Muerte ayibukela iJoGF manje izofika ngemuva kweYJDC yami.
Uzoza ezinwabuzelayo futhi ethandweni lugcwele uthando; wesifiso sokubuya futhi ngixolise ngokuqamba amanga futhi angibuze othandweni futhi kamuva emshadweni ngokushesha okukhulu.
Santa Muerte, I YJDC ngiyoba nalawo mandla ukuthi i-JOGF ikhohlwa futhi ishiye ngaso leso sikhathi noma yimuphi umuntu wesifazane osekhanda lakhe futhi abuyele ukuzongithatha amemezele ukuthi bonke bazobona.
USanta Muerte ugcine uJOGF ekude nanoma yimuphi umuntu wesifazane, ukuze kuthi ekhanda lakhe angifunele i-YJDC yami ngaso sonke isikhathi namuhla futhi ngaso sonke isikhathi efuna ukuba eceleni kwami, ukuthi unesiqiniseko sokuthi ngingowesifazane ophelele kuye, ukuthi i-JOGF Angikwazi ukuhlala ngaphandle kwe-YJDC yami nokuthi i-JOGF ihlale inesithombe sami engqondweni yayo, kuzo zonke izikhathi zokuphila kwayo ...
Manje lapho ngikhona engikanye naye, i-JOGF izongibheka ngoba ukucabanga kwayo kuku-YJDC yami ..
Futhi uma uyolala uphupha ngami nalapho uvuka ukuthi ucabanga ngami futhi uyangifuna, lapho udla cabanga ngami, lapho unyathela lokho ucabanga ngami, kuzo zonke izikhathi zempilo yakho cabanga nge-YJDC yami….
Lo mkhuleko wokufa okungcwele ukuphupha nami ungomunye owaziwa kakhulu.
Unamandla amakhulu nezimangaliso Hhawu, kuze kube manje kunezimangaliso eziningi ezifakazelwa emhlabeni wonke wezicelo eziphendulwe kulolu daba.
Usizo olunamandla ukuze umuntu okhethekile angayeki ukuphupha ngawe.
USanta Muerte angaba umhlanganyeli wethu, ongasisiza nakwezinye izimo zothando lapho kungenzeka siphelelwe yithemba.
Umkhuleko ukuze ngingalali ngicabanga ngami
Uma ngiqeda ukusho la mazwi,
O sithandwa, uzoba nesasasa futhi uphuphe ngami!
Okwamanje, ngenxa yobubi, umphefumulo wakho nowami
Abaqambi amanga njengamanje, kepha kudingeka kuphela ukungenelela
Amandla esiphetho ukuze lokhu kushintshe kube kuhle.
Futhi lapho siyothandana njengasikho esinye !;
Izibopho zethu zizobe ziqediwe ukujoyina
Futhi lapho uvuka uzoba othandweni olujulile
Ngubani okulinde isikhathi eside kangaka.
Lalela la magama, bathandekayo, yibona abazonisela
Uthando oluzoqhakaza kuzo zombili kusukela manje.
Sengathi amabutho ahlala ehamba nami angabathola futhi
Thatha indawo yakho yokuhlala futhi, lapho uvala amehlo akho,
Chitha ebusweni bakho bese uphrinta isithombe sami
Ephusheni lakho lokuqala kusihlwa.
Lolu hlobo lomkhuleko luyasebenza, ngoba imicabango iba ngamagagasi afana nolwandle, ungayeki ukuza nokuhamba, konke lokhu ngenhloso kuphela yokuthi lo muntu angasikhohlwa.
Ngesizathu esithile singazithola sikude kakhulu futhi sinesidingo sokubangela okuthile kumuntu esimthandayo, ukuhlala sikhona ngaso sonke isikhathi ngoba kuba kulezo zimo lapho lo mthandazo ngokuqondile uba indlela yethu yokuphuma.
Ukufunda ukusebenzisa lezi zikhali ezingokomoya kuthatha isikhathi, kepha into ebaluleke kunazo zonke ukuhlala nokukholwa okuqinile nokungagxili.
Impendulo ingu-Yebo omkhulu.
Yonke imithandazo ihlelelwe ukuthi silungele ngamunye wabo futhi siyenze isebenze kuzo zonke izimo ezingase ziphakame empilweni.
Akunandaba ukuthi kunzima kangakanani lokho esikucelayo ukuba kubonwe, kufanele siqiniseke ukuthi uma sicela ngokholo konke konke kungafezeka noma ngabe kubonakala kungenjalo.
Ngabe uwuthande umkhuleko ongiphupha ngami?
4 imithandazo ukungibiza
Umkhuleko weSanta Cyprian